'भाङ खाएर नीति तथा कार्यक्रम लेखेको हो?' | Nagarik News - Nepal Republic Media
'भाङ खाएर नीति तथा कार्यक्रम लेखेको हो?'
काठमाडौं - राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले जनताको मागअनुसार संविधान संशोधन गरेर सर्व-स्वीकार्य बनाइनुपर्ने बताएका छन्। आइतबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसद्‌को छलफलमा भाग लिँदै महतोले संविधानमा संविधान संशोधन अनिवार्य रहेको बताए।
नीति तथा कार्यक्रममा संविधानमा कुनै असन्तुष्टि नरहेको उल्लेख गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए। उनले भने 'विगतका आन्दोलन के हुन्, सयौंको बलिदानी के हो? संसदमा पटक-पटक उठेका आवाज के हुन्? उनले प्रश्न गर्दै भने, '‘नीति कार्यक्रम भाङ खाएर लेखेको हो र ? त्यो त नहुनु पर्ने, तर त्यस्तै पो भयो,’।
प्रकाशित: २२ वैशाख २०७६ १२:२४ आइतबार
राष्ट्रिय_जनता_पार्टी राजेन्द्र_महतो संविधान